Fifaninanana hataon’ny CUA : 200 ireo polisy kaominaly horaisina | NewsMada
Fifaninanana hataon’ny CUA : 200 ireo polisy kaominaly horaisina
Nisokatra ny alarobia teo ny fisoratana anarana ho an’ireo hifaninana hiditra ho polisy monisipaly ao amin’ny kaominin’Antananarivo renivohitra. Tsy hifarana izany raha tsy ny zoma 22 avrily ? amin’ny 12 ora antoandro. Aterina ao amin’ny Biraon’ny « Service des Relations Extérieures de la Direction du Cabinet », izay misahana vonjimaika ny fikarakarana ny fifaninanana.
Handraisana olona 100 ny fifaninanana mivantana. Vehivavy 25 ary lehilahy ny 75.
Handraisana olona 100 hafa ihany koa ny fifaninanana ho an’ny efa mpiasan’ny kaominina. Vehivavy ny 25 ary lehilahy ny 75.
Misokatra ho an’ny zatovolahy sy zatovovavy mahafeno ireto fepetra ireto ny fifaninanana mivantana. Mizaka ny zom-pirenena malagasy, mipetraka sy monina eto Antananarivo Renivohitra, feno 20 taona raha kely indrindra ary 35 taona raha be indrindra amin’ny andro hifaninanana .
Mirefy 1,70 m raha fohy indrindra ny lehilahy ary 1, 65 m ny vehivavy. Manana ny zo rehetra ara-piarahamonina, tsara fitondrantena, tsy mbola nisazy na eo am-piandrasana raharaham-pitsarana momba ny heloka bevava, tsy mararin’ny raboka, homamiadana, habokàna lefakozatra na areti-mifindra hafa.
Ara-dalàna manoloana ny fanompoam-pirenena, manana ny diplaoma BEPC na CFEPCES, na ny mitovy lenta aminy.
Ny fifaninanana ho an’ny efa mpandraharaha kosa dia misokatra ho an’ny lahy sy vavy miasa ao amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ka mahafeno ny fepetra takiana. Anisan’izany ny fizakana ny zom-pirenena malagasy, efa niasa 5 taona farafahakeliny tany anivon’ny departemanta samihafa ao amin’ny kaominina, feno 20 taona raha kely indrindra ary 35 taona raha be indrindra amin’ny andro hifaninanana.
Mirefy 1,70 m raha fohy indrindra ny lehilahy, ary 1,65 m ny vehivavy. Manana ny zo rehetra ara-piarahamonina, tsara fitondran-tena, tsy mbola nisazy na eo am-piandrasana raharaham-pitsarana momba ny heloka bevava . Tsy mararin’ny raboka, homamiadana, habokàna, lefakozatra, na areti-mifindra hafa.
Ara-dalàna manoloana ny fanompoam-pirenena ary manana ny diplaoma BEPC (na CFEPCES), na ny mitovy lenta aminy. Manana taratasy manamarina ny maha mpiasa avy amin’ny tale misahana ny mpiasa ao amin’ny kaominina.
Takiana ho an’ny mpifaninana ny antontan-taratasy maromaro toy ny fangatahana hifaninana vita sora-tanana, « Curriculum Vitae » misy ny sarin’ny mpifaninana sy ny laharana finday ahazoana mifandray maika. Ankoatra izany ny kopian’ny diplaoma na fanamarinana ny nahafahana BEPC (CFEPCES) voamarina fa mitovy amin’ny « Original ». Taratasy manamarina ny nandoavana saram-pisoratana anarana 20 000Ar tao amin’ny « Régisseur des Recettes de la Direction du Cabinet » , biraon’ny CUA eny amin’ny Stade Municipal Mahamasina . Taratasy manamarina ny refin’ny mpifaninana avy amin’ny tale kabinetran’ny CUA, « Casier judiciaire Bulletin n°3 » nalaina latsaky ny 3 volana. Eo koa ny kopia nahaterahana na «Jugement» latsaky ny 3 volana, taratasy fanamarinana momba ny fanompoam-pirenena, taratasy fanamarinam-ponenana nalaina latsaky ny 3 volana, dika mitovy voamarin’ny karapanondrompirenena nalaina latsaky ny 3 volana, valopy 3 misy hajia 300 ariary isanisany misy ny adiresin’ny mpifaninana.